नेपालमा आज पनि ठुलो संख्यामा थपिए नयाँ को-रोना संक्रमित,यति धेरैको मृत्यु, कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए? – Sandesh Press
नेपालमा आज पनि ठुलो संख्यामा थपिए नयाँ को-रोना संक्रमित, यति धेरैको मृ-त्यु, कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ? केही दिनयताको तथ्यांक हेर्दा को-रोना संक्रमितबाट मृ- त्यु हुनेको संख्या पनि बढेको देखिएको छ ।मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ३९३८ जना काे-राेना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ११,८७० पीसीआर परीक्षणमा ३००७ जना र ६,५३८ एन्टिजेन परीक्षणमा ९३१ जना गरी ३९३८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
Prev१ वर्ष देखि गायब भएका युटुबर भाग्य न्यौपाने घरजम गरेर पत्निसँग रमाइलो गरिरहेको अवस्थामा फेला परे,
Nextरातिदेखि बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा भी’षण आ’गलागी, पानी खसाउँदै सिम्रिक एयर